Xoojinta beelaha Archives - Wasaaradda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Archives Tag: Xoojinta bulshada
Ganacsigu waxa uu balaadhiyaa kooxda u heellan horumarinta fursadaha siman ee bulshooyinka iyo ganacsiyada yaryar
Jessica Camacho ee Yakima inay hogaamiso Shabakadda Adkeysiga Ganacsiga Yaryar ee gobolka oo dhan; Karlena Brailey iyo Norma Chavez waxay qabtaan jagooyinka hawlgelinta bulshada ee Jasiiradda Olombikada iyo gobollada koonfurta dhexe. OLYMPIA, WA — Saddex shaqaale oo dhawaan ay soo kiraysatay Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington ayaa si wayn u kordhisay ka qaybgalka bulshada iyo kooxda wacyigelinta ee wakaalada ee u heellan horumarinta sinnaanta iyo fursada miyiga iyo bulshooyinka aan la adeegin, ganacsiyada yaryar iyo ururada. Jessica Camacho oo Yakima ah
Qaybta cusub ee 2020-21 waxay aqoonsanaysaa xeeladaha dawladda hoose ee wax ka qabashada saamaynta isbeddelka cimilada. OLYMPIA, WA —Gov. Jay Inslee iyo Agaasimaha Waaxda Ganacsiga Lisa Brown ayaa goor dhow ku dhawaaqay 11-ka ku guuleystay Abaalmarinta Bulshooyinka Smart 2020-21. Waxaa la bilaabay 2006 -dii, Barnaamijka Abaalmarinta Bulshooyinka Smart Smart ee Badhasaabka ayaa sannad walba u aqoonsata dawladaha hoose iyo la -hawlgalayaashooda shaqo gaar ah oo ku aaddan hirgelinta Xeerka Maareynta Kobaca ee gobolka (GMA) si loo qaabeeyo koboca mustaqbalka, muhiimadda dhaqaale iyo
Deeqaha Soo-kabashada Bulshada ee aan macaash doonka ahayn waxay ka caawisaa ururada bixiya meelaha lagu kulmo iyo adeegyada halyeeyada iyo qoysaskooda gobolka oo dhan. OLYMPIA, Wash – –Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington iyo Waaxda Arimaha Dibada ee Gobolka Washington (WDVA) waxay ku abaal mariyeen $ 2.2 milyan oo deeqo ah soo kabashada bulshada ee aan macaash doonka ahayn si ay u caawiyaan Ururada Adeegyada Halyeeyada ah ee aan macaash doonka ahayn (VSOs) iyagoo sii wadaya taakuleynta halyeeyada intii lagu jiray aafada. VSOs waxay bixiyaan adeegyo muhiim u ah bulshada gobolka oo dhan
Ganacsiga iyo ArtsFund ayaa abaalmarin ku dhowaad $ 11 milyan oo gargaar faafa ah u fidiyay hay'adaha samafalka ah ee Washington
In ka badan 700 urur oo ka tirsan 34 degmo ayaa la siiyaa deeqo si ay uga caawiso ka soo kabashada saameynta COVID-19 SEATTLE, WA. - ArtsFund, oo kaashanaysa Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington, waxay bilaabi doontaa inay u qaybiso $ 10.78 milyan oo deeqo soo kabasho ah 702 aan macaash doon ahayn 34 degmo oo gobolka oo dhan ah toddobaadkan. Barnaamijka deeqda bulshada ee aan macaash doonka ahayn (NCR) ee lagu dhawaaqay May 3, 2021 waxaa loogu talagalay in lagu bixiyo maaliyad muhiim u ah farshaxanka, dhaqanka, sayniska,
Dadka degan gobolka Washington ee hada kaqeyb galaya Barnaamijka Caawinta Dakhliga Yar ee kuleylka iyo Barnaamijka Caawinta Tamarta (LIHEAP) ayaa dalban kara faa'iidooyinka khaaska ah ee dhibaatooyinka OLYMPIA, WA - Waaxda Ganacsiga usbuucii la soo dhaafay waxay bixisay ilaa $ 1,000 caawimaad kiro ah iyo ilaa $ 500 caawimaad tamar qoysaska uqalma Barnaamijka Caawinta Tamarta Guriga ee Dakhliga-Hoose (LIHEAP). Maalgelinta dhibaatada waxaa loo qaybin doonaa iyada oo loo marayo shabakadda ganacsiga ee gobolka oo dhan ee waxqabadka bulshada